သင်ဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာဖြေကြည့်ပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » သင်ဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာဖြေကြည့်ပါ…
Posted by lu ta lone on May 14, 2010 in Other - Non Channelized | 10 comments
လူတလုံး အာဘော်... သင်ဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာဖြေကြည့်ပါ...
ပဲရစ် – go to question 4
2 ။ စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါငိုတတ်သလား?
ငိုတတ်တယ် – go to question 4
မငိုတတ်ဘူး – go to question 3
3 ။ သင်ဟာချစ်သူနဲ့ ချိန်းထားတယ်၊ ပြောထားတဲ့အချိန်ထက်တစ်နာရီလောက်နောက်ကျနေတာတောင်သူကရောက်မလာသေးဘူး၊ ဒါဆိုသင်ဘာလုပ်မလဲ?
နောက်ထပ်နာရီဝက်တော့ထပ်စောင့်လိုက်မယ် – go to question 4
ချက်ချင်းပဲပြန်တော့မယ် – go to question 5
လာတဲ့အထိစောင့်မှာပေါ့ – go to question 6
4 ။ တစ်ယောက်ထဲရုပ်ရှင်သွားကြည့်တတ်လား?
အင်း – go to question 5
ဟင့်အင်း – go to question 6
5 ။ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ ချိန်မှာ သူကသူ့ ကိုနမ်းဖို့ တောင်းဆိုလာရင် ဘာလုပ်မလဲ?
မနမ်းပါဘူး – go to question 6
သူ့ လက်ခုံကိုပဲဖွဖွလေးနမ်းမယ် – go to question 7
ကိုယ့်ချစ်သူပဲ၊ နမ်းမှာပေါ့– go to question 8
6 ။ သင်ကဟာသဥာဏ်ရွှင်တဲ့သူလား
ဟုတ်တယ် – go to question 7
မဟုတ်ဘူး – go to question 8
7 ။ သင်ဟာဘယ်အရာမဆိုဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူလား
ထင်ပါတယ် – go to question 9
မဟုတ်ပါဘူး – go to question 10
8 ။ တကယ်လို့ သင့်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိရင် ဘယ်လိုလူအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ချင်သလဲ
ယောင်္ကျားအဖြစ် – go to question 9
မိန်းမအဖြစ် – go to question 10
ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ – TYPE D ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
9 ။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာချစ်သူတစ်ယောက်ထက်ပိုထားဖူးသလား။
ထားဖူးတယ် – TYPE B ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
မထားဖူးပါ – TYPE A ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
10 ။ သင်ဟာလိမ္မာပါးနပ်သူလို့ ထင်ပါသလား။
ထင်ပါတယ် – TYPE D ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
မထင်ပါဘူး – TYPE C ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )
သင်ဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်အရမ်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်၊ ချစ်သူရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာသင်ဟာချစ်စဖွယ်အလှက်ိုပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ်ရှိနေမှာပါ
သင်ဟာချောမောလှပရုံတင်မက ဟာသဥာဏ်ရှိသူ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုဘယ်လိုပေါင်းသင်းရမယ်၊ အချိန်ကိုဘယ်လိုခွဲဝေအသုံးချရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိသူပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာလူတွေကြားမှာအမြဲတမ်းထင်ပေါ်နေမှာပါ။
သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်အပေါ်အလွယ်တကူတော့ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သင့်အပေါ်လွယ်လွယ်ကူကူချစ်မိသွားဖို့ တော့သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဟာသဥာဏ်ကလူတွေက်ိုပျော်ရွှင်မှုရစေမှာပါ။ သင့်ချစ်သူကလဲသင်နဲ့ အတူရှိရတာပျော်နေပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်လူအပေါ်အလွယ်တကူမဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာသင်ရှိနေတာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင်သင့်မှာကောင်းကွက်လေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်။ သင်ဟာရိုးသားဖြူစင်ဖို့ တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့အမြင်မှန်ဖို့ လဲလိုမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့သင်ဟာခင်မင်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြမှာပါ။
သင်ဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာလုံးဝကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိပါဘူးတဲ့။ သင်ဟာဗဟုသုတလဲသိပ်မကြွယ်ဝသူပါ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းလဲသိပ်မရှိပါဘူး။ ချစ်သူအပေါ်မှာလဲရိုင်းပျစော်ကားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်တွေကြားမှာသိပ်ပြီးမထင်ပေါ်သူပါ။
ဟား ဟား… နောက်ထပ် ဖြည့်စွက်လေးတွေ တင်ပါဦးမယ်…
ဒီစာကို အခုမှဖတ်ရတာ အသိနောက်ကျတယ်လိုတောင်ထင်မိပါဗျား။
တကယ်ကောင်းတဲ့အဖြေ ပဲ…………Type A လေ :-p
တကယ်ကောင်းတဲ့အဖြေပါ …………….Type A လေ
ကောင်းလိုက်တာဗျာတော်တော်ကိုမှန်တယ်ဗျ။ပိုပြီးပျော်တာပေါ.ဗျာ။ဘာ.လို.လဲဆိုတော.ကျွန်တော်ကလည်း Type A ဖြစ်နေတာလေ။
Type A ပဲဗျို့။ ကောင်းတယ်ဗျာ ဒီလိုစာမျုိုးလွယ်လွယ်နဲ့ေ၇းလို့မရဘူး